May 2019 - CeleLove
မီးဝင်နေတဲ့ အားသွင်းကြိုးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ခဲ့တဲ့ နှစ် နှစ်အရွယ်သမီးလေး ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုး
May 22, 2019 Cele Love 0
မီးဝင်နေတဲ့ အားသွင်းကြိုးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ခဲ့တဲ့ နှစ် နှစ်အရွယ်သမီးလေး ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘူလန်ရှာဟာပြည်နယ် ဂျာဟန်ဂျီရာဘတ်မြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၈ ရက်နေ့က ဖုန်းအားသွင်ကြိုး ကို ပါးစပ်ထဲ ထည့်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးတစ်ယောက် ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသွားခဲ့၇ရှာပါတယ် …။ ဒီ ဖြစ်ပွားမှုဟာ ကလေးမလေးရဲ့ […]
ဆယ်လီဖြစ်နေတဲ့ဒီဖားကြောင့် ဆရာကြီးမနေသာ ” မိုး” ဟောကိန်းထုတ်….
ဆယ်လီဖြစ်နေတဲ့ဒီဖားကြောင့် ဆရာကြီးမနေသာ ” မိုး” ဟောကိန်းထုတ်…. ဆ ယ်လီဖြစ် နေ တဲ့ဒီဖားကြောင့် ဆရာ ကြီးမနေသာ ” မိုး” ဟောကိန်းထုတ် လိုက် ပါ တ ယ် …။ ပူလွန်းလှတဲ့ နွေ ” ၂၂-၅-၂၀၁၉ […]
ကားခမပါလို့မန္တလေးကနေ မကွေးကို နေပူကျဲကျဲကားလမ်းမပေါ်မှာ ဖိနပ်မပါပဲ ရောက်သလောက်ခြေလျှင်လျှောက်တဲ့ သားမိနှစ်ယောက်…
ကားခမပါလို့မန္တလေးကနေ မကွေးကို နေပူကျဲကျဲကားလမ်းမပေါ်မှာ ဖိနပ်မပါပဲ ရောက်သလောက်ခြေလျှင်လျှောက်တဲ့ သားမိနှစ်ယောက်… ကြွားတာမဟုတ်ဘူး ….အချို့ဘဝတွေအတွက်စိတ်မကောင်းပီး ကိုယ့်လုပ်ရပ်အတွက် ပီတိဖြစ်လို့ပါ နော် …။ နေ့ခင်း ၁၁း၃၀ လောက် ကိုယ်တယောက်ထဲခရီးကအပြန် နေပူကျဲကျဲကားလမ်းမပေါ်မှာ ဖိနပ်မပါ ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့အသက်၂၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိမဲ့မိခင်တယောက် ၃နှစ်သားအရွယ်ကလေး လက်ဆွဲသွားနေတာတွေ့တော့ … ကားပြန်ကွေ့ပီးဒီလောက်နေပူပူ ဖိနပ်ဘာလို့ […]
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်း …
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်း … ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ယခုနှစ်တွင် မိမိဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောပြိး အထူးအောင်မြင်မှုရရှိမည်နှစ်ဖြစ်သည်။ မည်မျှခက်ခဲသောကိစ္စရပ်များပင်ဖြစ်စေ ထူးခြားစွာအောင်မြင်မှု ရတတ်သည်။ မိမိ၏ ကံနှင့်ဥာဏ်ကို အားကိုယ်ပြိး မလျော့သော ဇွဲ့လုံဝိရိယဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါ။ ယခုနှစ်တွင် အခက်များ တွေ့ကြုံလေ ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှု မကြာခင်ရတော့မည့်ဟု ယုံကြည့်ထားလိုက်ပါ […]
သည်းခံခြင်းက အောင်မြင်ခြင်းပါ…..ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါနော် …။
သည်းခံခြင်းက အောင်မြင်ခြင်းပါ…..ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါနော် …။ မာန မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မာနကြောင့် အခြားသူကို အနေကျပ်မှာဆိုးလို့ပါ …။ ရန်မဖြစ်တတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ဖြစ်ခြင်းက နှစ်ဦးစလုံးကို ထိခိုက်စေလို့ပါ …။ လောဘ မရှိတာမဟုတ်ဘူး။ သူများမျက်ရည်ပါနေတဲ့ ထမင်းကို မစားချင်လို့ပါ …။ အောင်မြင်မှူ အကြီးကြီး မလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ […]
ဂျပန်နာမည်ကြီး အပြာမင်းသားကြီးနဲ့ ကိစ္စ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပြောပြီ
ဂျပန်နာမည်ကြီး အပြာမင်းသားကြီးနဲ့ ကိစ္စ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပြောပြီ #ApannPyay ဂျပန်အပြာမင်းသားကြီး ဂျပန်ဂတုံးဆိုသူနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော် တို့အကြောင်းတစ်ချို့ကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ အကောင့်တစ်ခုကနေပြီး တင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ အဲ့ဒီအကောင့်သည် Jung Hong Kim ဆိုတဲ့အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကောင့်မှ […]
ဆားဝက်ခြံနဲ့အဆီကြိတ်တွေ အရှင်းပျောက်ဖို့ အသားအရေပညာရှင်တွေ သုံးတဲ့အဆင့် (၅)ဆင့်
ဆားဝက်ခြံနဲ့အဆီကြိတ်တွေ အရှင်းပျောက်ဖို့ အသားအရေပညာရှင်တွေ သုံးတဲ့အဆင့် (၅)ဆင့် မျက်နှာပေါ်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဆားဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်တွေကို ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင် အသားအရေပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကိုသန့်စင်ခြင်း၊ ဆားဝက်ခြံ၊ အဆီကြိတ်တွေ ထုတ်ခြင်း၊ ချွေးပေါက်ပြန်ပိတ်အောင် လုပ်ခြင်း စတဲ့ အဆင့်လေးတွေကို မှန်အောင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မှ ဆားဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်တွေ […]
ဒါတွေကို တကယ်လုပ်ပါ.. မင်း တစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲစေရဘူး
ဒါတွေကို တကယ်လုပ်ပါ.. မင်း တစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲစေရဘူး တကယ်ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေ တကယ်လုပ် ၁။အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွတဲ့ အလုပ်မရွေးပါနဲ့ …၊ ၂။ချွေတာစုဆောင်း သူဌေးလောင်းတဲ့ ရသမျှကို အကုန်မသုံးပါနဲ့ စုနိုင်သမျှ စုပါ …။ ၃။အချိန်ဟူသည် အဖိုးတန်ဆုံးသော အရင်းအနှီးတဲ့ အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့ အကြိုးရှိစွာ […]
သိန်းပေါင်း ၅ သောင်းကျော်လေလံ စုကြေးမဲ လိမ်လည်မှုဖြစ် . . ဒိုင်များထွက်ပြေး
သိန်းပေါင်း ၅ သောင်းကျော်လေလံ စုကြေးမဲ လိမ်လည်မှုဖြစ် . . ဒိုင်များထွက်ပြေး လမိုင်းမြို့အခြေစိုက် လေလံမဲလိမ်လည်မှု ဖြစ်စဉ် လေ့လာ/သိရှိ/ကြားမိသမျှ ယခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ငွေစုလေလံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့၊ လုပ်ကိုင်သူ ၄ ဦးစလုံးမှာ လမိုင်းမြို့ဒေသခံများဟု သိရသည် …. ။ မယုံကြည်နိုင်လောက်သော အကျိုးအမြတ်များ […]
မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်လာပြီး အခြေအနေဆိုးနေလို့ သက်ဆိုင်ရာမှ အမြန်ဆုံးကူညီပေးကြပါ.. (ရုပ်သံ)
မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်လာပြီး အခြေအနေဆိုးနေလို့ သက်ဆိုင်ရာမှ အမြန်ဆုံးကူညီပေးကြပါ.. (ရုပ်သံ) လမိုင်းမြို့ အခြေအနေဆိုးနေပြီ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်လာပြီ သက်ဆိုင်ရာ မှ အမြန်ဆုံးကူညီပေးကြပါ လမိုင်းမြို့ယခု..ညနေ.၃းဝဝနာရီ အမြန်ဆုံးကူညီပေးကြပါသက်ဆိုင်ရာ မှ.. တစ်မြို့လုံးမီးပါလောင်ကုန်တော့မယ် …. ။ ငွေကြေးလိမ်လည်မှူမှ…တဆင့် မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာနောက်ဆက်တွဲတွေ..ပါ …. ။ လမိုင်းမြို့အခြေစိုက် လေလံမဲလိမ်လည်မှု […]